Warshada Alaabada | Soo-saareyaasha Alaabada Shiinaha, Badeecado
Caaryada garaafka ee shubka joogtada ah waxaa loola jeedaa alaabada garaafka ee loo isticmaalo wasakhaha si joogto ah loo shubay. Tiknoolajiyada biraha joogtada ah ee birta ayaa ah tiknoolajiyad cusub oo si toos ah birta dhalaalisaysa ugu rogaysa alaab iyada oo loo marayo caaryada sii kordheysa ee shubka. Sababtoo ah ma rogrogayso oo waxay u noqotaa qalab toos ah, kuleylka labaad ee biraha waa laga fogaadaa, sidaa darteed tamar badan ayaa la badbaadin karaa.
Saxanka garaafka (garaafka garaafka) wuxuu qaataa qalab garaaf leh oo tayo sare leh, isagoo ku daraya iskudhaf dabiici ah caabbinta aashitada adag Waxaa lagu sifeeyay sameynta-cadaadis sare, sameynta faakiyuum, iyo daaweynta kuleylka heerkulka sare. Waxay leedahay asiidh aan caadi ahayn iyo iska caabin heerkulka ah. Waa shey ku habboon dahaadhida taangiyada fal-celinta fosforik acid iyo taangiyada kaydinta fosfooriyada aaladda kiimikada. Wax soo saarku wuxuu leeyahay astaamaha u adkeysiga xirashada, iska caabbinta heerkulka, iska caabbinta cadaadiska, iska caabinta daxalka, iska caabbinta cagaarshowga, saliid-is-saliid-la’aanta, isugeyn ballaarinta yar, iyo waxqabadka daboolidda oo sarreeya.
Garaafka la Madiiday
Xirmooyinka garaafka ee garaafka wanaagsan ee ay soo saaraan wax qaboojinta qabow waa si ballaaran loogu isticmaalo mashiinada, elektaroniga, semiconductors, silsilada polycrystalline, silsiladda monocrystalline, metallurgy, kiimikada, dharka, foornooyinka korontada, teknolojiyadda hawada iyo warshadaha bayoolojiga iyo kiimikada.
Garaafku wuxuu leeyahay astaamaha soo socda:
Dhaqdhaqaaqa korantada wanaagsan iyo kuleylka kuleylka sareeya
Ballaarinta kuleylka oo hooseysa iyo iska caabbinta sare ee shoogga kuleylka.
Awooddu waxay ku kordheysaa heerkulka sare, waxayna u adkeysan kartaa in ka badan 3000 darajo.
Hantida kiimikada ee xasilloon oo ay adag tahay in laga fal celiyo
Si fudud loo farsameeyo
Garaafka Sawirka, Weelka Kaarboon Garaafka, Doonta Garaafka Labaad, Qaybaha Dayactirka Graphite, Doonta Garaafka Semi-Wareegga ah, Iskuduwaha Garaafka,